Bright Live, vidiyo Apple ọhụrụ iji kpalie anyị na Apple Watch | Esi m mac
A awa ole na ole gara aga, anyị zutere ọhụrụ Apple vidiyo tinye na mgbasa ozi mgbasa ozi. ọzọ Apple nche bụ protagonist, na-akpọ anyị ka anyị biri na ọchịK’anyi bie ndu di ike na nke obi uto. Iji hụ ihe a niile, enyi zuru oke nke ika ahụ bụ Apple Watch, yana karịa karịa n'usoro 2, na-enye anyị ohere iwere ya n'ihe ọ bụla n'ọnọdụ ekele maka ikike ya ịbanye mita ole na ole. Na mbata nke oge opupu ihe ubi na ezigbo ihu igwe, ọ bụ oge zuru oke iji gosipụta Apple Watch. Apple maara ya ma gbasaa vidiyo a iji dọta gị. Ma ọ bụrụ na i nweela ya, jiri ya mee ihe.
Mmegharị, egwu, ihe, bụ isi ihe mejupụtara vidiyo ahụ nke ga-ewe otu nkeji. N'oge a, anyị na-ahụ ọnọdụ niile anyị ga - eme ka elekere anyị kachasị: na - agagharị mgbe anyị nọ ọdụ ogologo oge, na - agagharị na ogige egwuregwu, ala ahịhịa ma ọ bụ na - ahụ Northern Light, bụ ụfọdụ ihe atụ. Ma anyị nwekwara ike ịme ọtụtụ ọrụ na-enweghị elekere anyị na-enwu gbaa: ịwụ elu, ịgba bọọlụ, basketball, ịgba ịnyịnya ugwu, ịgba egwu ma ọ bụ ọbụlagodi ịrụ ọrụ
Na dika, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Apple Watch Series 2, obi abụọ adịghị ya na ọrụ ndị mmiri gbara gburugburu na-apụta: igwu mmiri, trampoline ma ọ bụ mmeri, n'etiti ndị ọzọ. Cheta na otu n'ime ndịiche dị na mmekọrita nke mbụ Apple Watch bụ iji ya mee ihe na mmiri ma ọ bụ na ịkpọtụrụ mmiri mmiri. Ọzọkwa na usoro 2 anyị na-achọta ihe nhazi kacha mma na nnabata GPS na ngwaọrụ.
O yiri ka ọ dị ịtụnanya, mana ọbụlagodi na ị na-ele vidiyo ahụ ugboro 3 ma ọ bụ 4, ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị na ị ga-ejedebe ọgwụ ọzọ nke adrenaline. Ọ bụrụ na ihe a niile, anyị na-agbakwunye egwu egwu nke Beyonce na Kendrick Lamar: Nnwere onwe, mmetụ ahụ na-aba ụba.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị gwara gị n'otu ibe a, akara ọhụụ maka Apple Watch Nike +, nke mere na ị ga-ahụ nke kachasị amasị gị, ma ọ bụ ụzọ ọzọ dị iche iche iji gbanwee site n'oge ruo n'oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Live Bright, ihe ọhụrụ Apple vidiyo iji kpalie anyị na Apple Watch
UltraVideoConverter, n'efu maka obere oge